Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, May 02, 2010 Sunday, May 02, 2010 Labels: ဖားကန့်မှော်နယ်မြေအကြောင်းများ , သုတအဖြာဖြာ
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတင် အရည်အသွေးကောင်း ကျောက်စိမ်းများ
ကျောက်စိမ်းအကြောင်း အနည်းငယ် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျောက်တစ်လုံး ကောင်းမကောင်းကို ကျောက်အသား၊ ကျောက်မှာ အနာအဆာ ကင်းမကင်း၊ အရည် လှမလှကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်.. အစိမ်းရောင်ကို အရည်ရယ်လို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းကြပါပြီး စိမ်းနေတဲ့ အရောင်ရှိတဲ့ ကျောက်ကို အရည်ကျောက်လို့ ခေါ်ပါတယ်.. ကျောက်တစ်လုံးလုံးမှာ အစိမ်းရောင်နည်းနေပြီး ကျောက်သားကောင်းနေရင်တော့ အသားကျောက်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်.. ကျောက်ရဲ့ အပြင်ဘက်က သစ်သီးများတွင်ပါသော အခွံကဲ့သို့ အပေါ်ယံဖုံးလွှမ်းထားသော အရာကို အခွံလို့ဘဲ သုံးနှုန်းကြပါတယ်.. ကျောက်ကောင်းမကောင်း သာမာန်အမြင်နဲ့တင် ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲပါတယ်.. ကျောက်ကို စစ်ဆေးဖို့ ကျောက်စိမ်း မှော်နယ်မြေမှာ အသုံးပြုကြတဲ့ ဓာတ်မီးတစ်မျိုးရှိပါတယ်.. အဲဒါကို ကျောက်ကြည့်ဓာတ်မီး လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျောက်စိမ်းများကို ကျောက်ကြည့်မီးနှင့်ကြည့်ကာ အကဲဖြတ်နေစဉ် ( photo source Here)
ကျောက်ကို ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လေဆာမီးရဲ့ အလင်းရောင်အောက်မှာ အစိမ်းရည် ရှိမရှိ၊ အရည်ကောင်းမကောင်း အကဲခတ်လို့ရပါတယ်.. မှော်ထဲမှာတော့ ကျောက်သမားတိုင်းမှာ ကျောက်ကြည့်ဓာတ်မီး ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်.. ကျောက်ကို အပြင်ဘန်းကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းကြပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကိုယ်ထင်တာ၊ ကိုယ်မှန်းတာနဲ့ လွဲတတ်တာမျိုးတွေ အများကြီးပါ။ ကျောက်တွေမှာလည်း အပြင်မှာ တစ်မျိုး၊ အတွင်းမှာ တစ်မျိုးနဲ့ မာယာ များတတ်ပါတယ်.. ခန့်မှန်းတာလွဲပြီး မွဲသွားတတ်သလို၊ ခန့်မှန်းတာမှန်ပြီး ချမ်းသာသွားတာလဲ အများကြီးပါ။
ကျောက်တစ်ပွင့်ရဲ့ တန်ဖိုးသည် သေးတာ ကြီးတာနှင့်မဆိုင်ဘဲ အရည်နှင့် အသားကိုသာ အဓိက ဆုံးဖြတ်ပါတယ်.. အပေါ်က ပုံမှာ လက်သည်းခွံအရွယ် ကျောက်တစ်ပွင့်ဟာ အကြမ်းသွေးထားတဲ့ ကျောက်တစ်ပွင့်ပါ။ အချောအဖြစ် အရောင်တင်ခြင်း၊ အရွယ်ညှိခြင်း မပြုလုပ်ရသေးပါဘူး.. ဒီအတိုင်းတင် ကျောက်ပိုင်ရှင်က မြန်မာငွေ ၁၀သိန်း ဈေးခေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်..
ကျောက်စိမ်းတစ်တုံး၏ ပြင်ပ ပုံသဏ္ဍာန်
ကျောက်ကြည့်ဓာတ်မီးနှင့် ထိုးကြည့်ကာ ကျောက်ကဲခတ်စဉ်
နေ့အလင်းရောင်အောက်မှာ ကျောက်ကြည့်မီးနှင့် ကြည့်သော အခြေအနေ
ညအချိန် ကျောက်ကြည့်မီးနှင့် ကြည့်သော အနေအထား
အခု ဒီပုံတွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကျောက်စိမ်းတစ်လုံးကို ကျောက်ကြည့်မီးနဲ့ ကြည့်ပြီး အကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါ အတွင်းထဲမှ အစိမ်းရောင် အရည်ကို အပြင်သားကို ဖောက်ထွင်းပြီး မြင်နေရပါတယ်.. ဒီတော့ ဒီကျောက်ဟာ ပြင်ပ အသားလဲကောင်းတယ်ဆိုရင် အတွင်းမှာ အရည်လဲရှိနေပြီဆိုတော့ ကျောက်ကောင်းတစ်လုံး ဖြစ်နေပြီလို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်။
ဒီလိုလေး ထိပ်နားကို ဖြတ်လိုက်ပါတယ်..
ကျောက်ကို ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့ပုံပါ အခြမ်း၂ခြမ်းဖြစ်နေပါပြီ
ကျောက်ကို ဒီအတိုင်းရောင်းတာထက် ဖြတ်လိုက်ပြီး အတွင်းက အရည်ပြချက် ကောင်းကောင်းမြင်ရပြီးဆိုရင် ဈေးပိုရနိုင်တာကြောင့် ကျောက်သမားများဟာ ကျောက်ကို ဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်.. ဒါကြောင့်လည်း အခုကျောက်ကို အပေါ်က ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း ၂ခြမ်း ဖြတ်လိုက်ပါတယ်.. အဲဒီမှာဘဲ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်က ဒီကျောက်ဟာ ပြင်ပကနေကြည့်ရင် အတွင်းပိုင်းထဲမှာ အရည်ကောင်းလှပါပြီလို့ မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ မသမာမှုနဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ အလိမ်အညာ ကျောက်တစ်လုံးသာ ဖြစ်နေကြောင်းကို ကျောက်ကို ဖြတ်လိုက်တဲ့ အခါမှသာ သိရပါတယ်။
၂ခြမ်း ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေ
လုပ်ထားပုံလေးက ကျောက်ရဲ့ ထိပ်တစ်နေရာကို ဖြတ်ပြီး အတွင်းထဲက ကျောက်အသားတစ်ချို့ကို ဂန်းနဲ့ ဖောက်ထုပ်ထားလိုက်ပါတယ်.. ဖယ်ထုပ်လိုက်တဲ့ ကျောက်သားတွေနေရာမှာ အစိမ်းရောင် သွားတိုက်ဆေး၊ ဖယောင်းနဲ့ ၊ ပလပ်စတစ် တစ်ချို့တို့ကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတာနဲ့ ကျောက်ကို ကျောက်ကပ်ကော်နဲ့ ပြန်ဆက်ပြီး ဆက်ရာကို မမြင်ရအောင် အပေါ်ကနေ အခွံအတု ပြုလုပ်ပြီး ဖုံးအုပ်လိုက်ပါတယ်.. တော်ရုံမျက်စိနဲ့ ကြည့်လို့ မမြင်ရအောင် ပိရိသေသပ်စွာနဲ့ ပညာသားပါပါ ပြုပြင်ပြီး လိမ်ညာ ရောင်းချတဲ့ ကျောက်တစ်လုံးသာ ဖြစ်နေပါတယ်.. လူတိုင်း လုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး.. ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးဦးက ပိပိရိရိ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လုပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်..
သွားတိုက်ဆေးအစိမ်းရောင်တွေ ထည့်ထားတဲ့အတွက် အပြင်ကနေကြည့်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဓာတ်မီးနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါဘဲဖြစ်ဖြစ် အတွင်းထဲက သွားတိုက်ဆေးရောင်ကြောင့် စိမ်းနေတာကို တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. သေသေချာချာ စစ်ကြည့်တော့မှ ဒီလိုထိပ်ပိုင်းလေးကို ဖြတ်ပြီး ပြန်ဆက်ထားတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါဟာ ကျောက်တစ်လုံးရဲ့ မာယာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမာယာကတော့ ပင်ကိုယ်ကျောက်ရဲ့ လှည့်စားချက်မဟုတ်ဘဲ လူတွေရဲ့ ဖန်တီးချက်ကြောင့် မာယာများတဲ့ ကျောက် ဖြစ်သွားရခြင်းပါ။ ကျောက်လောကမှာ ဒီလို လိမ်ညာမှုများလည်း ရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ရော၊ ကျောက်လောကထဲ ၀င်မယ်လို့များ ရည်မှန်းထားသူတွေ ရှိရင် တွေ့ကြုံရတတ် တာလေးကို သိရအောင် တင်ပေးတဲ့သဘောပါ။
(ဒီပိုစ့်လေးကတော့ ဘလော့လောကနေ အနားယူပြီး ဖားကန့်တက် ကျောက်အရောင်း အ၀ယ် လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် အထောက်အကူ အဖြစ် အသုံးဝင် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ဒီနည်းကိုသုံးပြီး သူများကိုတော့ သွားမရောင်းနဲ့ပေါ့နော်. :) :) )
သိထားသမျှ အချက်အလက်တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာပါခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်..